Hirschsprung (ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ) - Hello Sayarwon
Hirschsprung (ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hirschsprung (ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ)
Hirschsprung (ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr . Phyu Mon Latt ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
Hirschsprung (ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ)ဆိုတာဘာလဲ။
Hirschsprung ရောဂါဟာ အူမကြီးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝမ်းသွားခြင်းမှာ ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ မွေးတဲ့အချိန်မှာ ကလေးငယ်ရဲ့ အူမကြီးကြွက်သားတွေကြားမှာ အာရုံကြောပျောက်ဆုံးမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အူအတွင်း ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု နည်းပါးတာကြောင့် အူမကြီးပိတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Hirschsprung ရောဂါရှိတဲ့ မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေဟာ မွေးပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ အူလှုပ်ရှားမှုမရှိပါဘူး။ ပျော့တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဒီအခြေအနေဟာ ကလေးငယ်အသက်ကြီးတဲ့အထိ တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Hirschsprung(ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ) ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
Hirschsprung ဟာ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Hirschsprung(ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ) ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Hirschsprung ရဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ ရောဂါပြင်းထန်မှုပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ မွေးပြီးချိန်မှာပေါ်လာပြီး အချို့ကတော့ အသက်ကြီးမှ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အဖြစ်အများဆုံး လက္ခဏာကတော့ မွေးပြီးချိန် ၄၈ နာရီအတွင်း အူလှုပ်ရှားမှု မရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ အခြားလက္ခဏာတွေကတော့
အန်ခြင်း (အစိမ်းရောင်၊ အညိုရောင်)
မွေးပြီး မကြာမီ meconium မထွက်ခြင်း
မွေးပြီး ၂၄ နာရီကနေ ၄၈ နာရီအတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် ဝမ်းမသွားခြင်း
အသက်ကြီးတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
ဘာတွေက Hirschsprung(ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ) ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
အူအတွင်း ကြွက်သား ကျုံ့ခြင်းတွေဟာ အူတစ်လျှောက်မှာ အစားအစာတွေ၊ အရည်တွေကို ခြေရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါကို peristalsis လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကြွက်သားအလွှာတွေကြားက အာရုံကြောတွေဟာ ကျုံ့ခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Hirschsprung ရောဂါမှာ အူအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရဲ့ အာရုံကြောတွေ ပျောက်ဆုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအာရုံကြောမရှိတဲ့နေရာတွေဟာ ပစ္စည်းတွေကို တွန်းမထုတ်နိုင်ပါဘူး။ အူပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ ပိတ်တဲ့နေရာရဲ့ နောက်မှာ စုပြုံနေပါတယ်။ အူနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ဟာလည်း ရောင်ရမ်းနိုင်ပါတယ်။
Hirschsprung ရောဂါကို ဘယ်အရာတွေက ဖြစ်စေသလဲဆိုတာ တိကျစွာ သိရှိခြင်း မရှိပါဘူး။ သူဟာ မိသားစုဝင်တွေအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားပြီး အချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ genetic mutation တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Hirschsprung(ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Hirschsprung ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Hirschsprung ရောဂါရှိသူ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး ရှိခြင်း – Hirschsprung ဟာ မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအခြေအနေရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်သင့်မှာ ရှိရင် နောက်တစ်ယောက်ရှိခဲ့ရင်လည်း ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
အမျိုးသား – Hirschsprung ရောဂါဟာ အမျိုးသားတွေမှာ အတွေ့များပါတယ်။
အခြား မွေးရာပါ အခြေအနေများ – Hirschsprung ဟာ အခြားမွေးရာပါ အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ Down syndrome နဲ့ မွေးရာပါနှလုံးရောဂါ အစရှိတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းတွေ အတွက် ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။
ယေဘူယျအသိပေးချက် – ယခုဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များမှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေးချက်များနေရာတွင် အစားထိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက်သိရှိလိုသောအချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲံ အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Hirschsprung(ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ) ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ ဆရာဝန်ဟာ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပြီး ကလေးငယ်ရဲ့ အူလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Hirschsprung ရောဂါကို သိရှိဖို့အတွက် စစ်ဆေးမှု တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုပြီး ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Contrast dye ကို အသုံးပြုတဲ့ abdominal X-ray – Barium သို့ အခြား dye တစ်ခုကို စအိုအတွင်းမှတစ်ဆင့် အူအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Barium ဟာ အူနံရံကို ဖြည့်လိုက်ပြီး အူမကြီးနဲ့ စအိုတို့ကို သေချာမြင်ရစေပါတယ်။ X-ray ဟာ တခါတရံမှာ အာရုံကြောမပါရှိတဲ့ အူရဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းနဲ့ သူ့နောက်က ပုံမှန်ပေမယ့် ရောင်နေတဲ့ အူအစိတ်အပိုင်းကိုလည်း ဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။
စအိုပတ်ပတ်လည်က ကြွက်သားတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှု တိုင်းတာခြင်း – Manometry test ကို အသက်ကြီးတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ လူကြီးတွေမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ဟာ စအိုအတွင်းမှာ ဘောလုံးကို လေမှုတ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည်က ကြွက်သားကတော့ ရလဒ်အနေနဲ့ ပျော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မပျော့သွားဘူးဆိုရင်တော့ Hirschsprung ရောဂါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသားစယူခြင်း – ဒါဟာ Hirschsprung ရောဂါရှိကြောင်း သက်သေပြဖို့ အသေချာဆုံးနည်းဖြစ်ပါတယ်။ အသားစယူခြင်းကို suction device နဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အာရုံကြောဆဲလ်တွေ ပျောက်ဆုံးနေလားဆိုတာ သိရှိဖို့ အနုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်မှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Hirschsprung(ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
Hirschsprung ရောဂါကို ကုသဖို့ အာရုံကြောဆဲလ်တွေမရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ကျော်တဲ့ ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ အူနံရံကို ခွဲထုတ်ပြီး ပုံမှန် အူကို အထဲမှာထည့်ကာ စအိုနဲ့ ဆက်သွယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို စအိုမှတစ်ဆင့် minimally invasive methods တွေနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အလွန်နေမကောင်းတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ ခွဲစိတ်မှုကို အဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ အူရဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ဖြတ်တောက်ပြီး အပေါ်မှာ အူရဲ့ ကျန်းမာတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ကလေးငယ်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းမှာ ဆရာဝန်က ဖန်တီးထားတဲ့ အပေါက်နဲ့ ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မစင်တွေဟာ ဒီအပေါက်ကတစ်ဆင့် အူရဲ့ အဆုံးမှအိပ်ထဲကို ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အူအောက်ပိုင်းကို ပြန်ကောင်းဖို့ အချိန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အူထုတ်ခြင်းမှာ အောက်ပါ အမျိုးအစားတွေပါဝင်ပါတယ်။
Ileostomy – ဆရာဝန်က အူမကြီး ထုတ်ပြီး အူသိမ်ကို အပေါက်နဲ့ ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မစင်တွေဟာ အပေါက်မှတစ်ဆင့် အိပ်ထဲကိုရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Colostomy – ဆရာဝန်က အူမကြီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ထားခဲ့ပြီး အပေါက်နဲ့ ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မစင်တွေဟာ အူမကြီးရဲ့ အဆုံးမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ခန္ဓါပြင်ပကို ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆရာဝန်က အပေါက်ကို ပိတ်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ အူအစိတ်အပိုင်းကို စအိုနဲ့ ပြန်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ ကလေးငယ်အတော်များများဟာ ပုံမှန်အတိုင်း ဝမ်းသွားကြပါတယ်။ အချို့ကတော့ ဝမ်းလျှောခြင်း အရင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေက ဝမ်းသွားစဉ် အသုံးပြုရတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ဘယ်လိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာ သင်ယူနေတာကြောင့် toilet training ဟာ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာတော့ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဗိုက်ဖေါင်းခြင်း၊ ဝမ်းယိုစိမ့်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေဟာ ခွဲစိတ်အပြီး အထူးသဖြင့် ပထမနှစ်မှာ အူရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အူရောင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေကို သတိထားသင့်ပြီး အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်တွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ခြင်း အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Hirschsprung(ဟစ်ခ်ျပရောင်း ခေါ် အူမကြီးဆိုင်ရာရောဂါ) ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Hirschsprung ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓါတ်များတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားပါ။ သင့်ကလေးက အစာမာတွေကို စားချင်ရင် အမျှင်ဓါတ်များတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ကျွေးပါ။ whole grains၊ အသီးအရွက်တွေကို ကျွေးသင့်ပြီး ပေါင်မုန့်ဖြူနဲ့ အမျှင်နည်းတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။
အမျှင်များတဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ပိုဆိုးစေတာကြောင့် သင့်ကလေးစားတဲ့ အစားအသောက်ထဲကို အမျှင်ဓါတ်တွေ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးက အစာမာတွေ မစားသေးဘူးဆိုရင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ အချို့ကလေးငယ်တွေကတော့ ခဏတာ အစာပြွန်လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
အရည်တွေကို တိုးမြှင့်ပါ – သင့်ကလေးကို ရေပိုသောက်ဖို့ အားပေးပါ။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးရဲ့ အူမကြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့) အကုန်လုံးဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ရေကိုစုပ်ယူခြင်းမှာ ဒုက္ခ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေကိုပိုသောက်ခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်ကို ရေဓါတ်ထိန်းပေးပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို အားပေးပါ။ နေ့စဉ် အေရိုးဗစ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ ပုံမှန်အူလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းပျော့ဆေး – တကယ်လို့ သင့်ကလေးငယ်က အမျှင်ဓါတ်များခြင်း၊ ရေ (သို့) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို မတုန့်ပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင် အူလှုပ်ရှားမှုတွေကို အားပေးပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် ဝမ်းပျော့ဆေးတွေကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို သင့်ကလေးကို ဝမ်းပျော့ဆေးတိုက်သင့်လားဆိုတာနဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 6, 2017
Hirschsprung disease. https://medlineplus.gov/ency/article/001140.htm. Accessed November 6, 2016
Hirschsprung's disease. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hirschsprung's-disease/home/ovc-20214664. Accessed November 6, 2016
Hirschsprung's disease. http://www.nhs.uk/conditions/hirschsprungs-disease/Pages/Introduction.aspx. Accessed November 6, 2016